Ebola: Fanentanana nataon’i Abdoulaye ao amin’ny GV Frantsay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2019 3:54 GMT
Avy any Ginea i Abdoulaye Bah, mpanoratra GV amin'ny teny Frantsay sady mpadika teny mahatalanjona. Firenena Afrikana iray tratran'ny fiparitahan'ny otrikaretina Ebola i Ginea, izay mbola tony amin'izao fotoana izao (Septambra 2014) ny toe-draharaha momba ity areti-mifindra ity .
Manahy izahay, ara-tsaina, satria tsy afaka manao na inona na inona. Tsy tena marina tanteraka izany. Momba ny zavatra iray ny ady amin'ity virosy ity. Iray hafa ny fanohanana ireo fikambanana ao an-toerana izay miezaka mampiely vaovao sy manampy ireo fianakavian'ny marary. Manana fifandraisana any Ginea i Abdoulaye, ary mahatoky an'i Fatou Baldé Yansane .
Nanomboka tamin'ny fitetezana ny arabe niaraka tamin'ny fanamafisam-peo tsotra mba hanomezana vaovao sy toro-hevitra mikasika ny Ebola ho an'ny vondrom-piarahamonina ity ramatoa tsy mitandro hasasarana ity. Nikarakara telethon tamin'ny fahitalavitra izy niaraka tamin'ny vehivavy hafa, ary izy no nifandraisana ho an'ny hetsika avy eny ifotony tao an-drenivohitra Conakry.
Nandray anajra noho izany i Abdoulaye ary nangataka ny vondrom-piarahamonin'ny GV miteny Frantsay mba hanampy amin'ny alàlan'ny famatsiam-bola amin'ny fitaovana ara-pitsaboana any an-toerana, izay tena ilaina maika. Toy ny mahazatra dia safidy sarotra ny fandefasana sy ny fampiasana ny fanomezana ho an'ny olana goavana sy maika toy izany. Tokony hanao fanomezana ny ONG lehibe ao an-toerana toy ny Doctors without borders ve isika? Sa handefa vola any amin'ny olona any Ginea ? Nisafidy ny fomban'ny vondrom-piarahamonina ny GV Frantsay: nandefa vola tany amin'i Abdoulaye, izay mahafantatra tsara ary izy no nanelanelana.
Tsy afaka nanao zavatra betsaka avy aty ivelany izahay, na namonjy ny tsirairay, kanefa afaka nifandray tamin'ny COFEL ny mpikambana GV izay maniry hifandray tamin'i Abdoulaye, na ny fikambanana misy an'i Fatou any Ginea. (Phone: (224) 664 213 533)